‘अपने २’मा देओल परिवारको साथमा कैटरिना र शिल्पा शेट्टी अट्लान् त? |‘अपने २’मा देओल परिवारको साथमा कैटरिना र शिल्पा शेट्टी अट्लान् त? – हिपमत
देओल परिवारले ‘अपने २’ फिल्म बनाउने घोषणा गरेका छन् । यस फिल्ममा धर्मेन्द्र, सनी देओल र बबी देओल सहित उनीहरुकै तेस्रो पुस्ताका करण देओल जोडिएका छन् । यसरी तीन पुस्तालाई एकै फिल्ममा देख्न सकिनेछ । कपुर खानदानले पनि यस्तो गरिसकेको छ । ‘कल आज र और कल’ मा पृथ्वीराज कपुर, राज कपुर र रणधीर कपुरले एकैपटक काम गरेका थिए ।
सनीका छोरा करणको यो दोस्रो फिल्म हो । यो भन्दा पहिला उनको फिल्म ‘पल पल दिल के पास’ असफल भएको थियो । त्यसकारण पनि करण सुरक्षित रुपमा अपने २ मा काम गर्दैछन् । फिल्म सफल होस् वा नहोस् उनलाई कुनै असर पर्दैन् ।
२००७ मा अपने रिलिज भएको थियो, जुन फिल्म बक्स अफिसमा हिट भएको थियो । अनिल र्माद्धारा निर्देशित फिल्ममा कैटरिना कैफ र शिल्पा शेट्टीले पनि अभिनय गरेका थिए । के अब पनि अपने २ मा यी दुई अभिनेत्रीले अभिनय गर्नेछन् त ?
फिल्ममा कैटरिना र शिल्पाले अभिनय गर्ने हुन्थे भने फिल्मको घोषणाको दिन नै जानकारी दिइन्थ्यो भन्ने जानकारहरुले बताउँछन् । अपने २ मा पुराना अभिनेत्रीहरु नदेखिने सम्भावना धेरै रहेको छ । करण देओलको साथमा कुनै नयाँ युवतीले बलिउड प्रवेश गर्ने अवसर मिल्ने देखिएको छ । सनी र बबीको अपोजिट अरु कुनै नायिका देखिनेछिन् ।
समाचार माध्यम अनुसार अपने २ मा बबी देओलको अपोजिटमा उर्वशी रौटला देखिने छिन् । तर, यसको हालसम्म औपचारिक पुष्टि भएको छैन् । यो फिल्मको मार्च २०२१ बाट सुर्टिङ सुरु भएर २०२१ को तिहारमा रिलिज हुनेछ । धेरै भाग पन्जाब र बाकी युरोपमा सुर्टिङ हुने यस फिल्ममा देओल परिवारको सशक्त भुमिका रहनेछ । फिल्मले देओल परिवारका सबै सदस्यको फेरी एक पटक करियर रफ्तारमा लैजान मद्दत गर्नेछ
मंगलबार, मंसिर १६, २०७७मा प्रकाशित गरिएको
आकाशको ‘ओ माई लर्ड’मा वर्षा सिवाकोटी ( भिडियो )
विवाह नै गोप्य राखेका गायक दुर्गेशले पुत्रलाभको तस्बिर राखेपछि…